CCIA – Voatra andiany faha-8: ho fampirisihana ny fanjifana ny “vita malagasy” | NewsMada
CCIA – Voatra andiany faha-8: ho fampirisihana ny fanjifana ny “vita malagasy”
Par Taratra sur 23/11/2021
Fampisehoana Voatra andiany faha-8, karakarain’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria eto Antananarivo. Hatomboka rahampitso 24 novambra izany ary hifarana ny 27 novambra 2021 eo amin’ny kianja Malacam Antanimena. Homen-danja manokana ny fanodinana ny vokatra eto an-toerana.
Hararaotin’ny Antenimieran’ny Varotra sy ny Indostria eto Antananarivo (CCIA) amin’io Voatra andiany faha-8 io ny famaranana ny faha-100 taona ny CCIA. Homena lohahevitra manokana mandritra io fotoana io ny fanodinana ny vokatra eto an-toerana, sy ho fanohanana ireo orinasa madinika sy salantsalany (PME). 40 ireo tranoheva haneho ny maha izy azy amin’ny fanodinana sy famoronana, ka hisy ny fizarana traikefa sy fifaninanana. Haseho amin’io fotoana io koa amin’ny alalan’ny varotra fampirantiana, ny tsara indrindra amin’ny vokatra, fonosana sy tranoheva.
Tsy misy vidim-pidirana, 4000 ny mpitsidika andrasana. Kendrena ny hampahafantatra ny PME eto an-toerana sy ny vokatra ahodiny, tsy Analamanga ihany fa ny manodidina, Bongolava, Itasy …”Misy, noho izany, mandritra io fotoana io ny varotra, fampirantiana, fihaonan’ny samy mpandraharaha, atrikasa fampiofanana, fijoroana vavolombelona, fifaninanana. Ny tena tanjona dia ny hampihena ny fanafarana entana”, hoy Rabemanantsoa Evelyne Roquie, filoha lefitry ny CCIA.
Fanohanana ny sehatra tsy miankina
Anisan’ny faritan’ny CCIA ny fanohanana ny sehatra tsy miankina sy manjifa ny “vita malagasy”. Ny fanjifana “vita malagasy” midika fanohanana PME eto an-toerana sy famoronana asa mivantana sy tsy mivantana. Mandritra ny atrikasa rahateo ny hanehoana ny olana diavin’ireo PME, toy ny fahalafosan’ny angovo, fahasarotan’ny fitaterana, sns. Etsy andaniny, ny mety hahitana fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka.
Efa mitondra ny anjarany io ny CCIA miaraka amin’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny fanjifana (MICC). Andrasana kosa ny mifameno amin’izay ny an’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana sy izay miankina aminy, toy izany indrindra koa ny an’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, hiadiana amin’izao haintany izao.